सरकारलाई उखु किसानको प्रश्न– अब साहुलाई खेत बुझाएर हामी सडकमा बास बस्नुपर्ने हो ?
उखु बेचेर घर खर्च चलाउने र आफ्ना ५ सन्तान तथा २ भाइलाई शिक्षादिक्षा दिलाउने आशमा ३ वर्ष अगाडि सर्लाही गोडैटा नगरपालिका– ११ शिशोरीका रामकल्याण महतोले साहुसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा १ लाख ऋण लिएर ३ बिगाहा जग्गामा उखु लगाए ।
महतोले त्यो बेला ल्याएको ऋण अहिलेसम्म तिर्न सकेका छैनन् । साहुले त्यसमा ब्याज जोडेर ४ लाख पुर्‍याएका छन् ।
त्यो बेलामा १ वर्षमा उखु बेचेर तिर्ने वाचामा ऋण लिएका थिए, तर ३ वर्ष पुग्दा पनि चिनी मिलले पैसा नदिँदा ब्याजको स्याज, स्याजको पनि ब्याज गरेर साहुले ४ लाख पुर्‍याएको महतोले दुखेसो पोखे ।
‘उखु बेचेर आफ्ना बालबच्चा पाल्छु भनेर उखु लगाउन ल्याएको १ लाख ऋण अहिले ४ लाख पुग्यो, अब हामीले कसरी ऋण तिर्ने ?’ महतोले आफ्नो दुखेसो पोख्दै भने, ‘अब त सरकारले पनि नहेरे जग्गा बेचेर तिर्ने बेला आयो ।’
‘उखुको ५ लाखभन्दा धेरै पैसा लिनु छ । पैसा लिन बाँकी हुँदाहुँदै पनि अब हामीले खेत बेचेर साहुको ऋण तिर्ने र सडकमा बसेर माग्ने ?’ महतोले सरकारसँग प्रश्न गरे ।
अहिले घरपरिवार चलाउनै समस्या भएको उनले बताए ।
‘घर/परिवार चलाउन पनि समस्या छ । भएको पैसा उखुमा फस्यो । अब हामीले के गर्ने ?,’ महतोले लोकान्तरसँग भने ।
सर्लाही गोडैटा नगरपालिका– ११ माधवपुरका सञ्जयकुमार राउत ऋण लिएर उखुमा लगानी गरेर धेरै ब्याज तिर्न बाध्य भएकामध्ये अर्का किसान हुन् ।
उनले पनि उखु खेतीका लागि साहुसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा २ लाख ऋण ल्याएका थिए । उखु बेचेर साहुको ऋण तिर्ने र घरपरिवार चलाउने योजनामा ऋण ल्याए तर चिनी मिलले पैसा नदिँदा अहिले ३ वर्षसम्म ब्याज समेत तिर्न सकेका छैनन् । साहुले पैसा नदिए खेत लगिदिने धम्की दिँदै आएको राउतले बताए ।
‘उखु लगाउन ल्याएको २ लाख ऋण अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन । साहुले खेत नै लैजान्छु भन्दैछ,’ राउतले दुखेसो पोखे, ‘अब सरकारले पैसा नमिलाइदिए साहुलाई खेत दिएर सडकमा बास बस्ने अवस्था छ ।’
ग्यारेजदेखि धर्मशालामा बास
आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका किसान यहाँका धर्मशालादेखि ग्यारेजमा बस्दै आएका छन् ।
गौशालाको धर्मशालामा बसेकाहरूले दैनिक ४ सय कोठाभाडा तिर्छन् ।
अध्यक्ष रायका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म माइतीघरमा आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन् ।
तर उनीहरूको बस्ने ठेगान भने छैन । आन्दोलन सकिएपछि संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामकुमार रायलाई कसलाई कहाँ सुताउने भन्ने चिन्ताले सताउने गर्छ ।
‘हामी अहिले कोही ग्यारेजमा, कोही धर्मशालामा बसेका छौं । आन्दोलन सकिएपछि साथीहरूलाई कहाँ सुताउने भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ अध्यक्ष रायले लोकान्तरसँग भने ।
गौशालाको धर्मशालामा २ वटा कोठा लिएर २५ जना किसान बस्दै आएका छन् । बिहान बेलुकाको खाना धर्मशालाको क्यान्टिनमा खाँदै आएको उनले बताए ।
कांग्रेसको जुलुसमा किसानको कुरै उठेन
अघिल्लो वर्षजस्तै यस वर्ष पनि उखु किसानहरू आन्दोलनका लागि राजधानीमा छन् ।
यही बीचमा सोमवार कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन गर्‍यो ।
काठमाडौंमा पनि कांग्रेसको जुलुस निस्कियो, तर जुलुसमा किसानका नाराले स्थान पाएनन् ।
माइतीघरबाट नेपाली कांग्रेसको जुलुस शान्ति बाटिकातर्फ जाँदै गर्दा उनीहरूले किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता समेत जनाएनन् ।
‘हामीलाई कुन पार्टी ? के पार्टी ? कस्तो पार्टी मतलब छैन । हामीलाई त केवल आफूले दुःख गरेर उत्पादन गरेको उखुको पैसा चाहिएको छ,’ अध्यक्ष रायले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनलाई जसले समर्थन गरे पनि हुन्छ, तर हाम्रो पैसा चाहिन्छ ।’
युरोपको झल्को दिने रूपन्देहीको विकास, सबैलाई उछिन्...